Filtrer les éléments par date : samedi, 29 décembre 2018
samedi, 29 décembre 2018 14:29
Fifidianana: Fitoriana mihoatra ny 1500 no hapetraky ny K25
Raha niomana ny hametraka izany fitoriana teny anivon'ny HCC androany ny K25, araka ny fetr'andro napetraky ny HCC, dia nisy fanemorana indray izany fetr'andro izany araky ny fanambaran'ny HCC androany, ka tsy hifarana izany fandraisana fitoriana izany raha tsy ny alatsinainy 31 desambra 2018 amin'ny 4 ora tolakandro.
samedi, 29 décembre 2018 14:23
HCC: Nahemotra hatramin'ny alatsinaina 31 desambra 2018 amin'ny 4 ora tolakandro ny farafandraisana ny fitoriana
Ireo mpifidy rehetra voasoratra anarana, ary nifidy dia afaka mametraka fitoriana eo anivon'ny HCC avokoa, raha nisy zavatra tsy nety tao amin'ny biraom-pifidianana nisy azy.
Tahak'izany koa ireo délégué, na mpanara-mason'ny fifidianana, dia afaka mitory amin'ireo biraom-pifidianana nanan'izy ireo mandat.
Ilaina ny dika copie légalisée n'ny carte électorale misy sonian'ny tompony, ary nifidy, ilaina ny copie CIN légalisée, ary ny fitantarana ny zava-misy sy ny fitarainana, miaraka amin'ny porofo.
samedi, 29 décembre 2018 14:11
Kianja 13 mey: Miverina ny hetsika fitakiana ny fahamarinana ny alarobia 02 janoary 2019
samedi, 29 décembre 2018 13:56
En application du système de délai franc mis en œuvre lors du premier tour de l’élection présidentielle, le dernier jour de dépôt des requêtes tombant normalement un samedi (voir communiqué du 28 décembre 2018), la date limite de dépôt est reportée au premier jour ouvrable suivant, c’est-à-dire le lundi 31 décembre 2018 à 16 heures.
samedi, 29 décembre 2018 13:13
Kianja 13 mey: Mandeha mivantana amin'ireo radio maro, isan'izany ny On Air Radio 100.6FM sy ny Radio Mada 100.8FM
Kianja 13 mey: Mandeha mivantana amin'ireo radio maro, isan'izany ny On Air Radio 100.6FM sy ny Radio Mada 100.8FM.
samedi, 29 décembre 2018 13:11
Kianja 13 mey: Lasa ireo miaramila, milamina ny fitakiana ny marina
Raha vao maraina dia tomefy mpitandro ny filaminana nandrara ny idirana teo amin'ny Kianja 13 mey, dia rehefa nandeha ny fifampiraharahana teo amin'ireo tompon'andraikitra, dia nahazo niditra ireto mpitaky ny fahamarinan'ny vokam-pifidianana.
Tsy nahazo nampiasa ny estrade kosa anefa izy ireo fa mbola nobahanan'ireo Emmo-Reg.
Nihamaro hatrany anefa ireo vahoaka tonga nameno ny kianja, ka dia niala teo ireo Miaramila sy Zandary.
Milamina tanteraka ny eo amin'ny kianjan'ny 13 mey amin'izao ary tsy mitsaha-mitombo ireo olona tonga eny an-toerana.
samedi, 29 décembre 2018 12:39
Tafika: Consigné avokoa ireo camp rehetra
Ho fihatrehana ny tampoka, dia nandray fanapahan-kevitra ny eo anivon'ny Tafika fa dia hiatrana avokoa ireo miaramila rehetra, ka dia mandray fepetra ny Chef de Corps samihafa ho consigné avokoa ny camp.
samedi, 29 décembre 2018 11:46
Brickaville: Natao perquisition ny tranon'ny prezida K25 Leriva Manahirana
Zandary enin-dahy avy eo an-toerana no tonga tao an-tranon'i Leriva Manahirana, omaly zoma 28 desambra, tokony ho tamin'ny 5ora hariva, hisava.
Tsy nampiseho taratasy ara-pitsarana maniraka ny hanaovana io fisavana io ry zareo raha nanontaniana, fa hoe: baiko avy amin'ny lehibe no tanterahina, fa hoe misy volabe avy amin'i Marc Ravalomanana hanaovana barazy na sakan-dalana amin'ny lalampirenana faha-2 eto Brickaville.
Tsy nanasaro-javatra anefa i Leriva Manahirana, depioten'i Brickaville teo aloha, tamin'ny anaran'ny Tiako i Madagasikara ity, fa navela nanatanteraka ny fisavana izy ireo.
samedi, 29 décembre 2018 11:40
Kianja 13 mey: Vaky barazy
Vao maraina dia tomefy mpitandro ny filaminana nanidy ny kianja 13 mey, tsy ahafahan'ireto mpitaky ny fahamarinan'ny latsa-bato ireto hiditra ny kianja.
Nihamaro anefa ireto mpanao fihetsiketsehana ireto, ary rehefa nifampiraharaha tamin'ireo Emmoreg dia nahazo niditra ankianja, fa ny estrade kosa hatreto mbola tsy navelan'izy ireo hidirana ampiasaina.
Milamina hatreto ny fihetsiketsehana fitakiana ny marina.
(Jereo Sary Tohiny na Album Photo)
samedi, 29 décembre 2018 06:52
Bemanonga-Morondava: Raim-pianakaviana nandavaka lavadrano maty nihotsahan'ny tany
Tao Mangily, Kaominina Bemanonga no nitrangan'ity loza ity omaly zoma 28 desambra, tokony ho tamin'ny 10 ora sy sasany maraina.
Nihady lavadrano, manana halalina 10m eo, hanaovana paompy Japy itony, ity Raim-pianakaviana ity no izao tra-doza izao.
Efa tamin'ny roa ora tolakandro vao tafavoaka tao anaty lavaka ny vatany, nampiasana fitaovan'ny BNGRC, saingy indrisy efa tsy nisy aina intsony.
Avy any Malaimbandy no fiavian'ity lehilahy namoy ny ainy ity. Efa maty vady izy. Namela kamboty roalahy izy izao nodimandry izao.
Ao amin'ny anabaviny eo Bemanonga ny razana.